Graton - Graton संग छुट्टी भोजन
Graton संग छुट्टी भोजन
नोभेम्बर २२, २०२१
हामीलाई अविस्मरणीय वार्षिकोत्सव महिना सिर्जना गर्न मद्दत गर्नुभएकोमा हाम्रा सबै अतिथिहरूलाई धन्यवाद, र वर्षौंदेखि तपाईंको सबै सहयोगको लागि! हामी हाम्रो सम्पत्तीको दुईवटा रेस्टुरेन्टहरू प्रस्तुत गर्ने स्वादिष्ट नयाँ ब्लग पोस्टको साथ फिर्ता छौं जुन तपाईंको अर्को छुट्टीको डिनरको लागि तयारी भइरहेको छ। यदि तपाईं यस वर्ष परिवार र साथीहरूको लागि भोजन योजनाको सामान्य तनावबाट बच्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, 630 पार्क स्टिकहाउस र टोनी अफ नर्थ बिचले उनीहरूको छुट्टीको मेनुमा तपाईंको लागि भण्डारमा के छ भनेर हेर्नुहोस्। चाहे यो आरक्षणको लागि होस् वा थोरै प्रेरणाको लागि, हामी मद्दत गर्न पाउँदा खुसी छौं!
धन्यवाद र क्रिसमस मेनु - 630 पार्क स्टेकहाउस
थ्यांक्सगिभिङमा, 630 पार्कले परम्परागत र पूर्ण रूपमा कोमल जडीबुटी रोस्टेड टर्की ब्रेस्टको साथमा कर्नब्रेड स्टफिङ, मिठाई-क्यान्डेड याम्स, युकोन गोल्ड म्यास्ड आलु, र ब्राउन शुगर ग्लाज्ड बेबी गाजरहरू प्रदान गर्नेछ। गिब्लेट सेज ग्रेभी र क्र्यानबेरी स्वाद कुनै पनि मेनु वस्तुमा राख्नको लागि उपलब्ध हुनेछ। मिठाईको लागि, हाम्रो टोलीले तपाइँको सामान्य कद्दिन पाईको सट्टा पम्पकिन क्रिम ब्रुली रोजेको छ।
उनीहरूको क्रिसमस मेनुको लागि, 630 पार्कले उनीहरूको हस्ताक्षर प्रविष्टिको लागि छोटो रिबमा क्याबरनेट वाइन ब्रेज्ड बोन चयन गरेको छ। ताजा बे पातहरू, काटेको प्याज, र काटिएको अजमोदको साथ पकाइएका र पकाइएका यी स्वादिष्ट छोटो रिबहरूलाई मीठो बटरनट स्क्वास प्यूरी, र क्रिस्प्ड, कारमेलाइज्ड ब्रसेल्स स्प्राउट्ससँगै दिइनेछ। मिठाईको लागि, आगन्तुकहरूले चकलेट पेपरमिन्ट पोट डे क्रेमको अर्डर लिन सक्छन् जुन चकलेटको धनी नोटहरू भएको मखमली नरम, क्रीमयुक्त कस्टर्ड हो।
धन्यवाद र क्रिसमस मेनु - उत्तरी बीचको टोनी
Tony's मा, तपाईंले थोरै फरक दृष्टिकोण फेला पार्नुहुनेछ किनभने तिनीहरूले ढिलो पकाएको डक कन्फिटको साथ पम्पकिन टोर्टेलोनी तयार गर्ने निर्णय गरेका छन्। सेज ब्राउन बटर सस र Parmigiano-Reggiano स्वादको जटिलता प्रदान गर्न र हाम्रा पाहुनाहरूलाई पनीर भलाइको स्पर्श प्रदान गर्न यस परिकारको साथमा छन्।
क्रिसमसको पूर्वसन्ध्या र क्रिसमसको दिनको लागि, टोनीले स्लो ब्रेज्ड ओसो बुको, वा प्याज, अजवाइन, गाजर र लसुनको साथ सुक्खा सेतो वाइनमा स्वादका साथ पकाइएको र पकाइएको ढिलो ब्रेज्ड ओस्सो बुको, वा सीर्ड भेल ट्याङ्कहरू सेवा गर्नेछन्। Osso Bucco सँगसँगै Saffron Risotto को एक पक्ष हुनेछ। आगन्तुकहरूले मिठाईको लागि डबल चकलेट बुडिनोको साथ आफ्नो खाना बन्द गर्न सक्छन्, कारमेलाइज गरिएको चिनीमा लेपित र हेजलनट बिस्कुटीसँग सेवा गरिन्छ।
छुट्टी पेय विशेष
सम्पत्तीमा हाम्रा बारहरू र लाउन्जहरू पनि आत्मामा आइरहेका छन्, एक जोडी हस्तशिल्प छुट्टी ककटेल विशेषको साथ! यी पेय पदार्थहरू चाँडै उपलब्ध हुनेछन्, त्यसैले तिनीहरू खस्दा एक चुस्कीको लागि रोक्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।
कद्दू अलेक्जेन्डर तपाईंको पतनको ऊर्जासँग मेल खाने उत्तम ककटेल हो। यसलाई नोभेम्बर 24 देखि जनवरी 1 सम्म प्राप्त गर्नुहोस्।
सामाग्री: ब्रान्डी, कद्दिन मदिरा, कहलुआ, दालचीनी साधारण सिरप, कद्दू प्यूरी, ह्विप्ड क्रीम, कद्दिन मसला, दालचीनी स्टिक
छुट्टी शैम्पेन ककटेल
रूख लगाउनदेखि नयाँ वर्षमा घण्टी बज्ने सम्म, हाम्रो हलिडे शैम्पेन ककटेलले तपाईंलाई कुनै पनि अवसरको लागि रमाइलो महसुस गराउनेछ। डिसेम्बर १ देखि जनवरी १ सम्म अर्डर गर्नुहोस्।
सामाग्री: जिन, अनार मदिरा, अनार प्युरी, क्रेनबेरी सुन्तला सरल सिरप, क्रेनबेरी, शैम्पेन
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले हाम्रा आगामी छुट्टीका उपहारहरूको बारेमा सुन्नु भएको छ! तपाईंको अर्को आरक्षण गर्ने बारे थप जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् रेस्टुरेन्ट पृष्ठ। सबै पाहुनाहरू २१ वर्ष वा सोभन्दा माथिको हुनुपर्छ। हामी तपाईंलाई यो छुट्टीको मौसममा सबैलाई शुभकामना दिन्छौं, र तपाईंलाई चाँडै भेट्नको लागि तत्पर छौं!
सेप्टेम्बर २,, २०२१
7 बोटहाउस व्यंजन को प्रयास गर्नुपर्छ
फिर्ता आउनु भएकोमा स्वागत छ! आज हामी एशियाई खाना को हाम्रो प्रेमीहरु को सबै को लागी एक विशेष उपचार पाएका छौं। हामीले एक साथ राखेका छौं […]
थप पढ्नुहोस्… बाट7बोटहाउस व्यंजन को प्रयास गर्नुपर्छ
२ 25, २०२१
Graton मा सूर्य मा रमाईलो!
नमस्ते साथीहरु! हामी आशा गर्दछौं कि तपाई उत्साहित हुनुहुन्छ कि न्यानो मौसम अन्ततः यहाँ छ! हामीलाई थाहा छ हामी हौं, र त्यसैले हामी […]
थप पढ्नुहोस्… बाट Graton मा सूर्य मा रमाईलो!